Home Wararka Talo ku socota Agaasimaha NISA Fahad Yasin Xaji Dahir.
Waa dhab in xaaladuhu u guureen meel adag oo hadda loo baahan yahay in la sameeyo waxa lagama maarmaanka ah oo kaliya ee aan lagu mashquulin wax dab sii hurinaya. Ikran Tahliil waxay sarkaal NISA ka tirsanaa oo hanti qaran ahaa kadib markii la tababaray, isla markaan ahayd gabar mustaqbal ifaya lahayd iyadoo reerkeedana oo ku soo tiir iyo tacab beelay ay joogtay waqtigii ay ku nasan lahaayeen si jeesjees ah iyo edebdarro ah loo dhaafiyey.
Haddii ay dhimatay oo ay run tahay waxaan tacsi gaarsiineynaa reerkeeda, asxaabteeda iyo dhammaan ummadda Somaliyeed oo ay u ahayd qof hantidooda lagu tababaray.
Dhacdadaan waxaa laga yaabaa inay abuuranto xaalado keena isbadal degdeg ah oo noocyo badan ah sida in dadka Somaliyeed iyo Xildhibaanadda iman doona ay fahman inaan Farmajo iyo kooxdiisa dalka lagu sii aamini Karin. Waxaa laga yabaa in dhacdadaan ay fure noqoto dhibatada Somaliya ka taagan sida:
Gabadhii lagu dilay Qabri Dahar oo soo dedejisay dhicitaankii dowladdii uu hogaaminayey Cabdi Maxamed Cumar oo loo garan ogyahay Cabdi Iley, halkaasna weli jeel kula jiro.
Maxamed Bouazizi oo ahaa wiilkii ay ka bilaabatay waxa loo yaqaanno gugii carabta kadib markii uu intuu xumaan iyo gabood fal sharcidarro ah ay hay’adaha amniga ku sameeyeen u adkeysan waayey dab isku qabtay, halkaasna ay shacabkii talada dalkooda la wareegeen.
In dadka Somaliyed ay talada dalkooda la wareegaan oo ay u dhiibtaa qof dhibaatooyinkaan ka saari kara oo u damqanaya. Waana buuxaan rag iyo haween dalka badbaadin kara ee karti iyo kalsooni aynu yeelanno.
Iyadoo sababsaneysa dhacdadaan waxaa ka bilowday Hiiraan in la afduubo dad masaakiin ah oo aan waxba galabsan laakiin ku hayb ah Fahad Yasiin. Dadka falkaas ku kacayaa waa dad ka careysan gaboodfalkii lagu sameeyey Ikran Tahliil, hasa yeeshee lagama yeelayo inay iyagana ku kacaan wixii ay ka cabanayeen oo ahaa gefka loo geystay gabadhaas.
Rabbi waxaa uu quraanka kariimka ku yiri : Qof dembigiisa qof kale looma qabanayo (Quran.com/35/18). Sidaas darted qolooyinka hadda ku kacaya falalka noocan ah ee afduubka dadka aan waxba geysan waxay la mid noqonayaa kuwa hadda aan ku dheggan nahay oo aan rabno in cadaallada la hor keeno. Marka qof walibow ka joog arrinkaan ma fududa caddaallada maalin unbey soo bixi doontaa ee haku sirmin maanta, adigana waa laguu qabsanayaa falkaad geysato.
Talo Ku aadan Fahad Yasiin Xaaji Daahir
Waxaan Fahad Yasiin Xaaji Daahir u soo jeedineynaa taladaan walaalnimo in uu si cad u sheego ciddii ka dambeysay falkan waxashnimada ah ee uu joojiyo dhiigbaxa ay arrintaan yeelan karto. Dadka qaar ayaa waxay leeyihiin wuxuu difaacayaa ciddii dembigaan gashay oo loo haysto inay madaxtooyada ku lug leedahay qarinta iyo daboolidda Falkaan.
Fahad haddii aadan raad ku lahayn waa in is beri yeeshaa oo eedda ku sheegaa cidda iska leh. Waa dhab mas’uuliyadda guud waa ku dul fuuleysaa oo waxaa tahay agaasimihii NISA, waxaysa ku ekaan kartaa in xilka lagaa qaado, laakiin ay Ikran Caddaalad hesho. Tuhun weyn ayaa la qabaa cidda falkaan geysatay in la yaqaanno lana hayo caddeymo, Fahad waxaa kuu fiican aadan halligin dadka masaakiinta ah ee horaba bilaabay inay bixiyaan dembi aaney shaqo ku lahayn.
Sidaas darted, Mudane Fahad ninka ragga ahi waxkasta waa la soo dersaan, u qaado talo kaa khaldantay oo go’aan adag ka qaado bannaankana soo dhig cidda ka afduubtay gabadhaas xaruuntii loo haysatay inay dalka ugu ammaan badan tahay oo ah Xaruunta NISA. Xaruuntaas oo aad madax ka tahay laga afduubto gabar aad madax u tahay, lana haystay muddo laba bilood ka badan, haddana la yiraahdo shabaab ayaa afduubatay oo dilay waa wax aan la aqbali Karin ee sharafta ka xigso oo farta ku fiiq cid kasta oo ka dambeysay.
Dhinaca kale, badbaadi reerkaaga inta aad cid kale badbaadin lahayd, hana isku dayin cid kale oo aan dembiga shaqo ku lahayn inaad ku dhibaateyso oo aad kula sahato ama aad ku wareejiso adigoo weli difaacaya cidda runta ah ee geysatay dembigaas.